Bakhala ngendlala eMusic House | Isolezwe
Bakhala ngendlala eMusic House
Izindaba / 13 September 2017, 09:06am / FANELESIBONGE BENGU
UMNYANGO wezobuCiko namaSiko, ezemiDlalo nokuNgcebeleka KwaZulu-Natal, oholwa nguNkk Bongi Sithole-Moloi uthi ngeke uphawule ngeMusic House KZN kuze kube kuphothulwa udaba olusenkantolo Isithombe:SITHUNYELWE
BAKHALA ngendlala abasebenzi besikhungo sokuqopha esixhaswe uhulumeni, iMusic House KZN njengoba selokhu bagcina emsebenzini ngoFebhuwari.
Omunye wabasebenzi ocele ukuthi igama lakhe ligodlwe uthe abazi ngempela ngekusasa labo kulesi sikhungo njengoba kusalokhu kucwebe iziziba.
Omunye uthe badlelwa impahla ngenxa yokungabi namali.
“Sesenza ezinye izinto eceleni ngoba asiholi. Kunokuthi uhlale kumele kube khona okwenzayo,” kusho umsebenzi.
Uthe begcina emsebenzini kwathiwa imali ayikho yize beqashwe ngokugcwele.
“Uma ngingathola umsebenzi okahle ngingababopha ukuze ngithole imali yami,” kusho umsebenzi.
Owayengumphathi omkhulu wemali, uMnuz Faisal Docrat, owaxoshwa ngo-2015, uthe uselahlekelwe okuningi ngesimo saseMusic House.
UDocrat wafaka isikhungo enkantolo ekhala ngokuxoshwa kwakhe. Icala walinqoba inkantolo yaze yathumela isikhonzi ukuba siyodla impahla ukuze athole imali yakhe. “Kade sisenkantolo ngoLwesihlanu ngoba uMnyango wezobuCiko namaSiko wathi impahla akusiyona eyeMusic House kodwa ngeyawo. Selizoqulwa eNkantolo yabaSebenzi ngoJanuwari 30, 31 noFebhuwari 1,” kusho uDocrat.
Okhulumela uNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko, ezemiDlalo nokuNgcebeleka KwaZulu-Natal, uMnuz Mack Makhathini, uthe umnyango ngeke ukwazi ukuphawula kuze kube udaba luyaphothulwa enkantolo.
Uthe iMusic House yinkampani ezimele futhi eziphathele izindaba zabasebenzi bayo.
Obambe njengenhloko uMnuz Ronnie Mokoena unqabile ukuphawula wathi akuthintwe inhloko yomnyango.
IMusic House KZN iqale yaziwa ngeKZN Music House ngesikhathi isaphethwe yiCommitted Artists kaMbongeni Ngema. Ngonyaka odlule ishintshe igama yaba yiMusic House KZN yabe isixhaswa wuMnyango wezobuCiko namaSiko hhayi owezokuThuthukiswa koMnotho njengaphambilini.
Okhulumela uMnyango wabaSebebenzi KwaZulu-Natal, uMnuz Lungelo Mkamba, uthe “Abeze eMnyangweni wethu, eRoyal Hotel ukuze sizophenya. Bangakwazi ngisho ukungazidaluli ukuthi bangobani uma besaba. Uma kunesidingo, umqashi sizomthathela izinyathelo,” kusho uMkamba
Uthe bathumele izinkontileka zokuqashwa kwabo nezitatimende zasebhange ukukhombisa ukuthi abaholi.